Akhri | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha | Page 3
Barashada habka ugu fiican ee caruurta loo tarbiyeeyo loona barbaariyo. Ilmaha wanaagsani waa riyada iyo rajada hooyo iyo aabe kaste, barbaarinta wacan ayaa noqonaysa in lagu beero caruurta akhlaaqda wanaagsan inta ay yaryihiin, tarbiyada wanaagsanna ma aha amarro iyo sharciyo, balse ilmuhu wuxuu ka helaa habdhaqanka iyo ficilada waalidkiis, ka dibna deegaanka ku xeeran. Qofkii barta barbaarinta hagaagsan ee caruurta, waxaa inta badan laga gartaa caruurta uu tarbiyeeyay. Waxa laga yaaba inuu ilmuhu kaa raaco jidh iyo muuqaal ahaan )family heredity) balse waxa uu rumaysanaayo, diinta uu qaadanaayo, dhaqanka uu yeelanaayo iyo qaabka uu u fikiraayo hido maaha lagumana dhalo waa …
Helen Warade waa hooya 3 carruur ah oo ay dhashay oo ay weliba aabba la’aan soo korsatay halmar ay si lama filaan ugu wada geeriyoodeen. Dab gurigeeda qabsaday ayey hal mar ku wada gubteen 3 carruur oo ay iyadu dhashay, walaasheed iyo ilma ay walaasheed dhashay qoyskeeda oo guud ahaan ka kooban 5 qof. “Carruurta inta ay iga geeriyoon ka hor waxaan dhibaata aad u badan kala kulmay korintooda iyo barbaarintooda caruurta oo 3 iskuul oo kala duwan wax ka baranaysay inaan iskuulka geeyo ama aan ka keeno waxay igu ahayd mid aad u adag” ayey tiri Helen. Seddexada carruurta …
Waxwalba wuu ku fikiray. Wuxuu jaray fillooyinka korontada iyo kaamerooyiinka qarsoon ee wax duuba. Wuxuu si iskii ah uu soo galay shaqada habeenkii. Gabadhana albaabka dambe ayuu kabihi ay ku bixi lahayd u dhigay. Jeon wuxuu saqdii dhexe hurdada ka toosiyey Kim wuxuuna u kaxeeyey jidka uu ku baxsan lahaa ee uu qorsheeyay. Habeen ka hor ayuu sii diyaarsaday laba boorso oo uu ku diyaarsaday dharki iyo cunadi uu u baahnaa, wuxuu sida oo kale diyaarsaday middi iyo sun. Fursad kale ma uusan helin, wuxuuna sitaa qori oo Kim ay isku deyday inay ka dhaadhiciso inuu ka tago laakiin Jeon …
Seynisyahankii u dhashay Britain ee lagu magacaabi jiray Charles Darwin wuxuu helay aragtida seynis ee ku saabsan noolaha adduunka, fikraddiisiina waxay ka mid tahay kuwa uu maanta ku tiirsan yahay seyniska casriga ah. Laga soo billaabo muddo dheer ka hor waa la sii hormarinayay aragtiyaha ku qotoma asalka nolosha dadka iyo xayawaannada adduunka. Buug uu Darwin qoray sanadkii 1859-kii ayuu ku qeexay aragtidiisa dhinaca seyniska ee abuurka noolaha, wuxuuna sheegay “inuu muuqaalka noolaha marba marka ka dambeysa isbaddalayay”, isagoo faahfaahiyay sida ay u kala duwanaadeen nooleyaasha kasoo farcama hal noole. Laakiin waxay u muuqataa in taariikhda seyniska noolaha ay qudheeda …
Laga soo bilaabo maalintii Nabi aadam la uumay ilaa maanta bini’aadamku hor-umar ayuu nolosha ka samaynayay, waagii baryana garaad iyo garasho ayuu aadanaha u kordhinayay. Nolosha waxaa tiir dhexaad u ah dhaqaalaha, dhaqaaluhuna waa wax-soo-saarka, si wax-soo-saar loo helana waa in la shaqeeyaa. Dhaqaale wax-soo-saar la’aan ma abuurmo, wax-soo-saar aan shaqo loo marina ma lahelo, umad walba inta ay umadaha kale ka shaqa badan tahay ayay ka wax-soo-saar badan tahay, kana dhaqaale roontahay, dhammaan ummadaha hor-umaray dadaal ay dadkoodu sameeyeen ayay hor-umarka ku gaareen, tabac iyo wax-soo-saar ayaana dhaqaalahooda kobciyay. Ujeedada ugu dambaysa ee ay dadku wax u tabcayaan waa …